GPS / Fitaovana - Geofumadas
Fitaovana sy fangatahana ho an'ny sarimihetsika sy cadastre
Vaovao momba ny HEXAGON 2019
Nanambara teknolojia vaovao i Hexagon ary nankasitraka ny fanavaozan'ny mpampiasa azy tao amin'ny HxGN LIVE 2019, ny kaonferansa manerantany ho an'ny vahaolana nomerika. Ity vovonan'ny vahaolana voasokajy ao amin'ny Hexagon AB, izay manana toerana mahaliana amin'ny sensor, rindrambaiko ary teknolojia mizaka tena, dia nandamina ny kaonferansa teknolojika naharitra naharitra efatra andro tao The Venetian any Las Vegas, Nevada, Etazonia.
Ny lozam-pifamoivoizana lasibatry ny 3D dia nahazo ny loka IF DESIGN
Ny fampiharana Leica Cyclone FIELD 360 no nahazo ny loka famolavolana faharoa tao amin'ny iF DESIGN AWARD 2019. Miaraka amin'ny orinasan-tserasera (UX) orinasa Ergosign, Leica Geosystems dia nanolotra ny fampiharana ao amin'ny sokajy fifandraisana. Nandritra ny 66 taona, ny IF DESIGN AWARD dia nekena ho mpitsara kalitao ho an'ny ...
Geotech + Dronetech: tokony tsy hahomby ianao
Tamin'ny 3 sy 4 aprily tamin'ity taona ity 2019, Fairoftechnology - orinasa Espaniôla, monina ao Malaga, dia mandamina karazana hetsika rehetra mifandraika amin'ny haitao- dia manasa ny mpiara-miasa amin'ny geoengineering rehetra handray anjara amin'ny hetsika lehibe iray, izay haneho zava-baovao maro izy ireo tato anatin'ny taona vitsivitsy. Fairoftechnology, manana ...